Mirehareha ny WoopShop.com manolotra serivisy fandefasana maimaim-poana eran'izao tontolo izao izay miasa any amin'ny firenena 200 mahery izao. Tsy misy zavatra hafa tiana holazaina aminay afa-tsy ny mitondra ny vidiny sy ny serivisy ho an'ny mpanjifantsika. Hanohy hitombo hatrany isika mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifantsika rehetra, amin'ny serivisy serivisy ankoatra ny antenaina rehetra.
Ny fonosana avy amin'ny trano fanatobiana entana any Shina dia halefan'ny ePacket na EMS arakaraka ny lanja sy ny haben'ny vokatra. Ny fonosana nalefa tao amin'ny trano fanatobiana anay dia alefa amin'ny USPS. Noho izany, noho ny antony ara-lojika dia halefa amina fonosana misaraka ny entana sasany.
WoopShop dia faly manome ny mpanjifantsika amin'ny fandefasana maimaim-poana amin'ny firenena 200 + manerantany. Na izany aza, misy toerana sasantsasany izay tsy vitantsika ny mandefa. Raha toa ka any amin'ny iray amin'ireo firenena ireo ianao dia hifandray aminareo.
Tsy voafehinay ny fiampangana ny fadin-tseranana, tsy tompon'andraikitra amin'ny vidin'ny ladoany izahay raha vantany vao nalefa ny entana satria ny politika sy ny haba any ivelany dia miovaova arakaraka ny firenena. Amin'ny fividianana ny vokatray dia manaiky ianao fa mety halefa aminao ny fonosana iray na maromaro ary mety hahazo sarany amin'ny fadin-tseranana rehefa tonga any amin'ny firenenao izy ireo.
Fomba fandefasana sy famindrana fotoana
Ny baiko rehetra dia alefa ao anatin'ny 36 ora. Ny fahaterahana dia mandray ny andro 7-20 amin'ny asa ary amin'ny tranga tsy fahita firy 30 andro.
Location Tombanana ho fotoana fandefasana
Etazonia 7-20 andro fiasana
Kanada, Eoropa 10-20 andro fiasana
Aostralia, Nouvelle-Zélande 10-21 andro fiasana
Meksika, Amerika Afovoany, Amerika Atsimo 15-21 andro fiasana
Firenena hafa 15-21 andro fiasana
Hahazo mailaka mailaka ianao rehefa mandefa ny baikoo misy ny fampahalalana momba ny fanarahan-dia anao, saingy indraindray tsy misy ny fanaraha-maso fandefasana fandefasana maimaim-poana. Indraindray ireo takelaka fanaraha-maso dia maharitra 2-5 andro ny orinasam-pifandraisana hanavaozana ny rafitra. Raha mila fanazavana fanampiny, dia aza misalasala mifandray aminay ary hanao izay azonay atao izahay hanampy anao.